mgbaru ọsọ (bụghị) zuru na rink! | Holmbygden.se
Ihe na 10 January, 2014 site Holmbygden.se
Nọ na-echere ndị ice rink ga-gbarụrụ bụ now a uppskottad rink na Church Bay zuru okè ice!
Ihe mgbaru ọsọ ugbu a na-chọtaghachi! Luckily, ọ zuru, ma mgbe ụfọdụ biiri n'okpuru achịkwa ọnọdụ.
One of målburarna na Anund Manor School yiri ka e zuru! Nke a dị mwute na ozi ọma e chọpụtara ụnyaahụ n'oge a nleta n'ụlọ akwụkwọ. Naanị otu n'ime ngịga, na n'elu, mgbe ahụ ekpe. E nweghị nso nke na-egosi mgbe ndị emiela, ma yikarịrị nso nso a na December-January.
BỤ nwere onye ọ bụla nke maara ihe ọ bụla banyere nke a?!
Ikwu n'okpuru ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!
Sundsvall Municipality emeghị iwepụ ihe na Holm
The ọzọ afọ were Sundsvall Municipality enweghị ịgwa onye na mberede wepụrụ rink i Anundgård. O doro anya na ọ dị mkpa ọzọ n'ebe ndị ọzọ. N'afọ gara aga, ha chere na ọ bụghị iwepụ ọ bụla ice, ma mgbe nsogbu #ShepherdsHut ha mere ya na agbanyeghị.
N'afọ a, obodo ama ọzọ bụghị zubere iji hazie ihe ice rink na Holm na niile. HBU ugbu a otu ugboro ọzọ a na na kọntaktị na Sundsvall obodo na mara ọkwa na anyị na-eche na ọ bụ n'okpuru nlelị na ha ga na-egbutu a na anyị. Tax ego ọbụna site Holm bi na ya bụ ihe na-akụda na o siri ike ọ bụla ọrụ adịghị ka na-aga azụ obodo.
HBU ugbu negotiated a ngwọta a. The nkọwa na-adịghị kpọgidere, ma obere, nke a pụtara na obodo ana achi achi na ọ dịkarịa ala ka njikere ice. Mgbe ahụ, anyị onwe anyị ga na-na-ya-agba ọsọ. A ngwọta na-adịghị mkpa na ndị ọzọ na ebe ke obodo, ma o doro anya na a mkpa iji nweta dị nnọọ anyị ice gbarụrụ. The rink ga-amalite n'oge na-adịghị flushing!
Ọtụtụ ndị na ekele HBU si òtù na-eme ka o kwe ha omume rink na oyi!
Mgbe ahụ anyị mkpakọrịta ga-etinye maka enyem maka mmezi nke rink, anyị aghaghị ịmata anyị so na anyị ngwa. N'ihi ya, anyị nwere ike na-egosi ihe ọtụtụ Holmbor ọ bụ n'azụ arịrịọ ka nwere ihe ice rink na Holm. HBU ya ga-achọ na-ekwu a nnukwu ekele gị onye ọ bụla na-adịbeghị anya sonyeere HBU n'ihu 2014 na n'otu oge ahụ na-enye ohere ka anyị na-enwe ihe ice rink afọ a!
Nkwado rink na HBU ị na! Mụta ihe banyere ghọọ onye òtù nke HBU maka naanị a femtiolapp.
(“Jikọọ Ugbu a” n'oge “kọntaktị” na menu.)
Rink disko nwekwara 2014?
HBU plan ikwugharị ikpeazụ afọ na-ewu ewu ihe omume na ihe ice-disko a oyi. O nwere ike ịbụ soro “ụlọ mmanya mgbede” na trubadur-Mike. Anyị ga-alaghachi na ozi ọzọ banyere nke a. Gụọ na-ahụ mara mma foto site ikpeazụ afọ ice-disko